China 5 matanda A3 Kucheka Mat, 661A3, Kuzviporesa wega Kucheka mat Kugadzira uye Fekitori | Allwin
Self kuporesa A3 kucheka mat fekitori yakananga
Yako-yekuzvirapa yekucheka bonde, chengetedza yako yekushanda tafura pamusoro. Iyo mateti yepamusoro yaive yakapfava PVC, usakanganise mucheka unocheka, Blades anonyanya kusimba Iwe unogona kushandisa iyi bonde sedziviriro yedesktop kana DIY yekucheka bhodhi mumba mako, kumba, chikoro kana hofisi.
5-rukoko PVC zvinhu, Chena kuomarara PVC iri pakati, Kudzivirira kucheka kuburikidza kana simba rakatemwa. Inoshanda zvakanaka kune inorema basa kucheka, inoenderana ne rotary cutters uye yakatwasuka mashizha.Some brand brand yekucheka matema yakasviba pakati, iyo isingagone !
Kucheka kwakarurama mativi maviri, ese masendimita uye metric gridlines & angles. Mat size: 18 x 12inches, Grid size: 17 x 11inches, ukobvu 3MM, akasiyana angles 30 ° 45 ° uye 90 °, Nyore kuverenga.
Chipo chakakwana chevanyengeri uye hobbyists! Professional fekitori yakananga kutengesa, mhando yakanaka uye mutengo Zvakanyanya kukurudzirwa kune muimbi, vagadziri, vavaki, quilters, engraver uye hobbyists.
Unogona kusarudza saizi dzakasiyana zvinoenderana nezvaunoda, A4 (12 x9 inch), A3 (18 X12inch), A2 (24 x18inch), A1 (36X24 inch), A0 (48X36 inch).
Item Model Nhamba 661A3
Chinyorwa Chemhando Type 5 masheya, epakati Hard Hard chena musimboti
Item Kurema 0.65kg pachidimbu
Chigadzirwa Zviyero 17.72 x 11.81 x 0.12 inches / 45 x 30 x 0.3 cm
Saizi (Yakatarwa.) A3
Rudzi rwezvinhu Pvc
Ruvara chairwo Girinhi, bhuruu, Pinki, Dema, Tsvuku, Ruvara
Chimiro chakanaka chekucheka chinofanira kunge chiine hunhu hunotevera;
1. Iyo mbishi zvinhu zvinofanirwa kuve zvakanaka kuitira kuti vagogona kupora otomatiki mushure mekucheka.
2. Mucheka wekucheka unofanirwa kuva wakakora, kuitira kuti chipande chigone kushandiswa kwenguva yakareba, uye bonde rekucheka pacharo rine hupenyu hwakareba hwebasa.
Kuchengetedza kwekucheka mat;
Isa panzvimbo yakati sandara kazhinji; dzivisa kupisa kwakanyanya kana zuva rakananga; usageze nemakemikari anonyungudutswa.
Chigadzirwa Chivimbiso: Tsigiro mushure mekutengesa zvigadzirwa 1 makore
Pashure: 5 akaturikidzana A2 Kucheka Mat, 661A2, Kuzviporesa wega Kucheka mat
Zvadaro: 5 akaturikidzana A4 Kucheka Mat, 661A4, Kuzviporesa wega Kucheka mat
Kucheka bonde reCricut, 9924, 12 ″ x24R ...
3 akaturikidzana A1 Kucheka Mat, 883A1, Self kurapa Cu ...
5 akaturikidzana A1 Kucheka Mat, 661A1, Self kurapa Cu ...